ỊWỤNYE LINUX SITE NA WINDO MBANYE - LINUX - 2019
Ntuziaka ntinye Linux na draịvụ Flash
Fọrọ nke nta na ọ dịghị onye na-eji disks maka ịwụnye Linux na PC ma ọ bụ laptọọpụ. Ọ dị mfe iji ọkụ USB na-ere ihe oyiyi na ngwa ngwa wụnye OS ọhụrụ. Ịgaghị enwe ọgba aghara gburugburu na ụgbọala, nke nwere ike ọ gaghị adịrịrị, na ị gaghị echegbu onwe gị banyere diski chara n'onwe. Site n'ịgbaso ntụziaka ndị dị mfe, ị nwere ike ịwụnye Linux site na ịnwepu ọkwọ ụgbọala.
Ịwụnye Linux site na windo mbanye
Mbụ, ịkwesịrị ịhazi usoro ụgbọala na FAT32. Olu ya ga-adịkarịa ala 4 GB. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnweghị akwụkwọ Linux, ma site na ụzọ, Intanet ga-agba ọsọ ọsọ.
Ịhazi usoro mgbasa ozi na FAT32 ga-enyere gị aka na ntụziaka anyị. Ọ na-ekwu banyere formatting na NTFS, mana usoro ga-abụ otu, naanị ebe niile ịchọrọ ịhọrọ nhọrọ "FAT32"
Ihe omumu: Otu esi esi gbanye USB flash na NTFS
Biko rịba ama na mgbe ị na wụnye Linux na laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba nkume, a ghaghị ịbanye na ngwaọrụ a (n'ime mkpuchi ike).
Nzọụkwụ 1: Download nkesa
Ọ ka mma ibudata ihe oyiyi site na Ubuntu site na saịtị gọọmentị. N'ebe ahụ ị nwere ike ịchọta ụdị nsụgharị nke OS ugbu a, na-enweghị nchegbu maka nje. Ikikere faịlụ ahụ ruru ihe dị ka 1.5 GB.
Ubuntu ọrụ gọọmentị
Lee kwa: Ntuziaka iji weghachite ehichapụ faịlụ na windo mbanye
Nzọụkwụ 2: Ịmepụta windo ngwa ngwa
O zughị ezu iji tụfuo ihe oyiyi ahụ ebudatara na USB flash drive, ọ dị mkpa ka ederede ya. Maka nzube ndị a, ịnwere ike iji otu ụlọ ọrụ pụrụ iche. Dị ka ihe atụ, were usoro Unetbootin ahụ. Iji mezue ọrụ ahụ, mee nke a:
Fanye USB flash drive na-agba ọsọ ihe omume ahụ. Tinye akọrọ "Ihe ngosi Disk"họrọ "Ụkpụrụ ISO" ma chọta onyinyo ahụ na kọmputa. Mgbe nke ahụ gasịrị, kọwaa USB flash drive wee pịa "OK".
A na windo ga-apụta na ọnọdụ ndekọ. Mgbe pịachara ya "Ọpụpụ". Ugbu a faịlụ nke nkesa nkata ga-apụta na flash drive.
Ọ bụrụ na a na-ebu boot drive na Linux, mgbe ahụ ị nwere ike iji ọrụ ahụ wuru. Iji mee nke a, pịnye na ọchụchọ maka arịrịọ "Ịmepụta diski ọkpụkpọ" - Nsonaazụ ya ga-abụ ọrụ ị chọrọ.
N'ime ya, ịkwesịrị ịkọwa ihe oyiyi nke USB flash drive wee pịa bọtịnụ ahụ "Mepụta diski bootable".
Gụkwuo banyere ịmepụta mgbasa ozi na Ubuntu na ntụziaka anyị.
Ihe omumu: Otu esi emepụta ngwa USB USB nwere ike iji ya na Ubuntu
Nzọụkwụ 3: Ntọala BIOS
Ka kọmputa wee gbanye USB mbanye, ị ga-achọ ịhazi ihe na BIOS. Enwere ike ịnweta ya site na ịpị "F2", "F10", "Hichapụ" ma ọ bụ "Esc". Mgbe ahụ soro usoro usoro dị mfe:
Mepee tab "Bọọ" ma gaa "Dọks Diski Ike".
N'ebe a wụnye USB flash drive dịka mgbasa ozi mbụ.
Ugbu a gawa "Ntinye ngwa ngwa" ma kenye ihe kacha mkpa nke onye mbụ na-ebu agha.
Chekwaa mgbanwe niile.
Usoro a bara uru maka AMI BIOS, ọ nwere ike iche na nsụgharị ndị ọzọ, ma ụkpụrụ ahụ bụ otu. Maka ama ọzọ gbasara usoro a, gụọ isiokwu anyị banyere ịmepụta BIOS.
Ihe omumu: Otu esi edozi bọọ si USB flash drive
Nzọụkwụ 4: Na-akwadebe maka nrụnye
Oge ọzọ ị malitegharịrị PC gị, boot drive ga-amalite ma ị ga-ahụ windo na ịhọrọ asụsụ na os boot mode. Ọzọ, mee ihe ndị a:
Họrọ "Ịwụnye Ubuntu".
Window na-esote ga-egosipụta atụmatụ nke ohere diski free na ma enwere njikọ Ịntanetị. I nwekwara ike ịkọwa mmelite nbudata na wụnye ngwanrọ, mana enwere ike ime nke a mgbe ị wụnye Ubuntu. Pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Ọzọ, họrọ ụdị nwụnye:
tinye OS ọhụrụ, na-ahapụ onye ochie ahụ;
tinye OS ọhụrụ, dochie ochie ahụ;
nkewa na diski diski (maka ndị ọkachamara ahụmahụ).
Dee nhọrọ a na-anabata. Anyị ga-atụle wụnye Ubuntu n'enweghị iwepu na Windows. Pịa "Nọgidenụ n'ihu".
Lee kwa: Otu esi echekwa faịlụ ma ọ bụrụ na ikpo ọkụ mbanye adịghị emeghe ma jụọ ka ọkpụkpọ
Nzọụkwụ 5: Gbanyụọ Space Diski
Window ga-apụta ebe ịkwesịrị ịkewa disk diski. A na-eme nke a site na ịkwaga onye na-ekewapụ. N'aka ekpe bụ ohere echere maka Windows, n'aka nri - Ubuntu. Pịa "Wụnye Ugbu a".
Biko rịba ama na Ubuntu chọrọ ihe dịkarịrị 10 GB nke ohere disk.
Nzọụkwụ 6: Mezue nwụnye
Ị ga-achọ ịhọrọ mpaghara oge gị, nhazi ihuenyo, ma mepụta akaụntụ onye ọrụ. Onye nhazi ahụ nwekwara ike ịnye ịbịnye data ndekọ Windows.
Mgbe ngwụcha ahụ ga-achọ ka ị malitegharịa. N'okwu a, a ga-akpalite gị iwepu windo mbanye ka ibughari ghara ịmalite ọzọ (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, weghachite ụkpụrụ ndị ọzọ na BIOS).
N'ikpeazụ, achọrọ m ịsị na ịrapagidesi ike na ntụziaka a, ị ga-enyocha ngwa ngwa ma wụnye Ubuntu Linux site na windo mbanye.
Lee kwa: Ekwentị ma ọ bụ mbadamba anaghị ahụ windo mbanye: ihe kpatara na ngwọta